Kaliya labo ciyaaryahan ayaa siddeed gool ka dhaliyey kulanka Manchester Derby horyaalka Premier League… (Waa kuwee?) – Gool FM
Manchester United ayaa indhaha ku haysa inay dagaal u gasho sidii ay kaalimaha afarta sare ee horyaalka ugu dhammaysan lahayd si ay xilli ciyaareedka dambe uga soo muuqato Tartanka Champions League, halka Man City ay tartan ugu jiro inay horyaalka Premier League hanato xilli ciyaareedkeedii labaad oo xiriir ah.
Kulankan labada kooxood ee isku magaalada ka dhisan dhex-maraya ayaa la yiraahdaa Manchester Derby, waxaana kulankan siddeed gool oo horyaalka Premier League ka dhaliyey kaliya labo ciyaaryahan.
Labada ciyaaryahan ee kulankan Manchester Derby siddeed gool ka dhaliyey horyaalka Premier League waxa ay kala yihiin kabtankii hore ee Man United Wayne Rooney iyo dhaliyaha kooxda Man City ee Sergio Agüero.
Xiddiga reer Argentina ee Kun Agüero ayaa caawa indhaha ku haya inuu goolkiisii sagaalaad ee horyaalka Premier League ka dhaliyo kulanka Manchester Derby marka ay booqanayaan garoonka Old Traffrod.
Shaxda rasmiga ah kulanka caawa Coppa Italia ee kooxaha Milan iyo Lazio oo la shaaciyey